नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : तपाईंलाई दुखको बेलामा साथ कसले देला ?
तपाईंलाई दुखको बेलामा साथ कसले देला ?
के तपाई बिरामी पर्दा एक्लै अस्पताल वा घर कै बेडमा छटपटाई बस्नु परेको छ ? कोहि भेट्न आई दिए पनि हुन्थ्यो , मनको कुरा गर्न पाए पनि हुन्थ्यो , नबोले पनि छेऊमा बसि दिने कोहि भै दिए पनि हुन्थ्यो, हात समातेर बस्ने कोही आई दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो ।
त्यस समयमा आफन्त, साथीभाई वा छरछिमेक लाई औला भाची भाची संझनु भएको थियो !
जब दुख पर्छ, मानिस चिनिन्छ भन्छन र बास्तब मै मानिस चिन्ने अवसर पनि यहि नै हो ।
बिबाह वाँ पार्टीमा निम्ताको कार्ड लेख्न बस्यो भने हातै दुख्ने गरि लेख्दा पनि कहि कतै कोही आफ्ना मान्छे छुट्टी हाल्ला कि भन्ने पिरलो हुन्छ । लाग्छ, आहा मेरा मान्छे त धेरै पो रहेछन र आफु ठुलै मान्छे भएको अनुभुत र भित्र भित्र घमण्ड पनि हुन्छ । बधाई र शुभकामना दिने हरूको ओइरो नै लाग्छ ।
जब दुख पर्छ तब थाहा हुन्छ कति रहेछनत, बास्तब मै आफ्ना मान्छेहरू। दुख पर्दा कार्ड पठाउने चलन पनि त छैन हाम्रो समाज । दुख बाड्नु हुदैन, सुनाउनु समेत हुदैन भन्छन । फेरि मलाई दुख पर्यो भनि झ्याली पिट्ने कुरा पनि त भएन ।
उहि तेहि मानिस थाहा पाएर पनि नपाए जस्तो बाटो काटेर हिड्छ । पार्टी खान गोठै बाधेर , कामै छाडेर आएको मानिस आज उसलाई भेट्न सम्म आउन फुर्सद भएन रे । गाऊँ भरिको कुरा थाहा पाउने उसले थाहै नपाएन भनेर नाटक गरेर हिड्छन ।
कसैको मृत्यु भयो भने फेसबुक मा श्रद्धांजलि, RIP , बैकुन्ठ बास होस, परिवारलाई धैर्य धारणा गर्ने शक्ती मिलोस भन्नेहरूको ओइरो नै लाग्छ । तर यो दुखमा मैले कसरी साथ दिनसक्छु वा के सहयोग गर्न सक्छु भनेर प्रत्यक्ष्य भेटेर वा फोन मै भए पनि हामी कतिले मनैबाट
भन्यौ होला ? आफ्नै छातीमा हात राखेर सोचौ त !
भन्नु होला मलाई के को पिर म त अमुक पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता वा संस्थाको सदस्य वा अन्तराष्ट्रीय संस्थाको सदस्य वा ... साथी भ्रममा नपर्नु होला कुनै नेता वा संस्थाले समबेदना वा सुस्वास्थ्यको कामना बाहेक कलैलाई केहि सहयोग गरेको मैले देखेको वा सुनेको छैन ।